နှစ်ချို့ကော်ဖီ: January 2008
ဖေဖော်ဝါရီသို့ တမ်းခြင်း ( ၁ )
ငါ့အနုပညာ စွပ်ကြောင်းရာတစ်လျှောက်လုံး မင်းကိုလွမ်းတဲ့ အလွမ်းတွေက ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်ခဲ့တယ် … ဖေဖော်ဝါရီ မတော်တဆအသည်းကွဲခဲ့ရာက ခြေချော်လက်ချော် ကဗျာဆရာဖြစ်လာသူလို့ ဆရာသစ္စာနီက သူ့ကိုယ်သူဖွင့်ဆိုဖူးတော့ ကဗျာဆရာဖြစ်ခဲ့ဖူးလို့ အသေအချာအသည်းကွဲခဲ့ရတာငါပေါ့ … ဖေဖော်ဝါရီ … ။ ငါ့ရင်ထဲမှာ မြည်တဲ့ခေါင်လောင်းသံဟာ မင်းနာမည်အထပ်ထပ် ရာစုနှစ်တစ်ခုလုံး မြေအောင်းခံလိုက်ရတဲ့ ၀ိုင်အရက်တွေလို ငါ့နှလုံးသွေးတွေ ပူပြင်းရှတကုန်ပြီ … ။ Suzuki R+ တွေကို မြန်မာပြည်အတွက် စီးရေတစ်ထောင်ကျော်ထုတ်လုပ်တော့မယ်တဲ့ သုံးထောင်ကျပ်တန် စက်ယက်ကန်းတစ်ရံနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ပလက်ဖောင်းတွေကို သစ္စာနှံခဲ့တဲ့ ငါ့ခြေထောက်တစ်စုံဟာ မီးပျက်နေတဲ့ မီးပွိုင့်တွေကြားမှာ တုန့်ဆိုင်းမသွားခဲ့ပါဘူး ရာစုသစ်တစ်ခုလုံးကို မာရေကျောရေ ဖြတ်သန်းသွားလာခဲ့ဖူးတယ် … ။ ဒီကဗျာတွေ ရေးဖြစ်တာတစ်ခုပဲ ငါ့ရင်ထဲမှာ အဖတ်တင်ကျန်ခဲ့တယ် အချိန်ယန္တယားတစ်ခုလုံးကို ပလက်ဖောင်းကဖေးမှာအရည်ဖျော်သောက်ပစ်လို့ မင်းအတွက်ကအပျင်းပြေပြန်ပြောစရာ အချစ်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပေမယ့်… ငါ့အတွက်တော့ နှလုံးသွေးနဲ့ရေးခဲ့တဲ့ ငါ့ဘ၀သမိုင်းဖတ်စာပါ… အဲဒါကို ကျောက်သားနံရံနဲ့ လပြည့်ဝန်းပလာဇာကလည်းမသိပြန်ဘူးတဲ့ ငါ့အချစ်စစ်တွေအတွက် ငါ့ဘက်ကထောက်ခံချက်တွေနည်းပါးလွန်းပါတယ် ဖေဖော်ဝါရီ…. ညဦးပိုင်း ပွဲချိန်အပြီးမှာ သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံထဲကလျှံထွက်ကျလာတဲ့ စုံတွဲတွေကိုငေးရင်း…. ယောက်လမ်းကားမှတ်တိုင်မှာ ယောက်ရက်ခတ်နေတဲ့အတွေးတွေနဲ့ အေးစက်တောင့်တင်းသွားတဲ့ဆောင်းညတစ်ချို့ ငါ့ပြက္ခဒိန်မှာထပ်တိုးသွားခဲ့ရဖူးတယ်…. ဖေဖော်ဝါရီရယ် ငါ့ရဲ့ပြင်းထန်ဆုံးပေးဆပ်နိုင်မှုက ငါ့ကဗျာကိုဖော်ပြထားတဲ့ မဂ္ဂဇင်းမှာ လက်မှတ်ထိုးပေးနိုင်ရုံပါ… စူပါမားကက်နံရံမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ နှစ်သောင်းခွဲတန်လက်ကိုင်အိတ်ကို မင်းငေးနေတဲ့မျက်ဝန်းမျိုးက ငါ့စိတ်အားငယ်မှုကို ငရဲတွင်းထဲထိပစ်ချတယ် ငါမအောင်မြင်ခဲ့တာအသေအချာပေါ့…။ တစ်ရက်တော့လေ ဆဲလ်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ Ring Tone က ငါ့ရင်ခုန်သံကိုဖြတ်တောက်လို့ မင်းနဲ့ငါစိတ်ခြင်းမနီးစပ်နိုင်တော့ဘူး လက်တစ်ကမ်းက ဓားသွားအစင်းစင်းဟာ ခုခံခြင်းကင်းတဲ့ ငါ့ကိုထိုးစိုက်တယ်…။ ဒါ… ကျွန်မသူငယ်ချင်း ကဗျာဆရာလေ…တဲ့ သံခင်းတမန်ခင်းအပြုံးနဲ့ မင်းမိတ်ဆက်ပေးတဲ့လူ ကြွယ်ဝမှုတွေနဲ့ မင်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့လူ ဆန့်ထားတဲ့လက်ကို မျက်နှာပျက်ပျက်နဲ့ရုတ်လိုက်တော့ မင်းကငါ့ကိုလူမှုရေးမသိတတ်သူလို့ အပြစ်တင်အထင်သေးတဲ့မျက်ဝန်းနဲ့ကြည့် ဖေဖော်ဝါရီရယ် မင်းမသိလိုက်ဘူး… ငါ့ဝင်လေထွက်လေမှာ အဓိပါယ်မဲ့သေးဆုံးသွားခဲ့တာ….။ မိုးလှိုင်ည Posted by
လမ်းတွေကိုထွန်းလင်းပြဖို့ပါပဲ ဘယ်ခရီးမှငါမသွားဖူးဘူး… တချို့ကမသိလိုက်မသိဘာသာပေါ့ ငါ့အောက်ကဖြတ်လျှောက်တယ် တချို့က ငါ့ကိုမော့ကြည့်ပြီးမှ ငါ့ထက်ပိုလင်းတဲ့အရပ်ကို ထွက်ခွာသွားပေါ့….။ တခါတရံ ငါ့ကိုယ်ငါ မှောင်မိုက်မိတဲ့အခါ တချို့ရဲ့ဆဲရေးသံတွေ လွင့်ပျံလာခဲ့တယ် ငါဟာဓါတ်တိုင်ပါ…. ဘယ်ခရီးမှငါမသွားဘူး… လမ်းတွေကိုထွန်းလင်းပြဖို့ပဲ ငါ့ဆီမှာအသက်ရှိတယ်လို့ တစ်ယောက်ယောက်ကယူဆလိုက်တဲ့နေ့မှာ ငါသေဆုံးသွားခဲ့တယ် ငါဟာဓါတ်တိုင်ဝင်စားတဲ့လူဖြစ်လို့…။ မိုးလှိုင်ည
ရှုခင်းကိုအခန်းထဲတိုးဝင်လာဖို့ ငါပြတင်းတံခါးကိုဖွင့်လိုက်တယ် ရှုခင်းကအခန်းထဲထိလျှောက်မလာဘူး အာရုံတစ်ဆုံးဆွဲဆန့်ကြည့်တာတောင် ငါ့ကိုယ်ငါစိမ်းလန်းမလာဘူး… နံရံရဲ့မြင်ကွင်းက နံရံကိုကာဆီးလို့ အမေနဲ့ရွာကိုထည့်ဖွက်ထားတဲ့ ငါ့ကျေးလက်ပန်းချီကားလေးမှုန်ဝါးလို့ ငါ့ကိုယ်ငါအနံ့ခံမိတော့ ပုပ်ပုပ်သိုးသိုးအင်္ဂတေနံ့ရတယ် ဘ၀ဆိုတာ နံရံကိုတွယ်တက်နေတုန်း နံရံကကိုယ်ပြန်ပိတာ အခါခါ……။ မိုးလှိုင်ည
အတောင်ပံဆိုတဲ့စကားစုထဲ ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးကိုထိုးထည့်တော့ ကောင်မလေးရဲ့နှုတ်ခမ်းသားစိုစိုမှာ ချစ်ခြင်းကပြတ်လျှလွယ်တယ် တံခါးကိုတွန်းဖွင့်လိုက်ရင် ညှင်းသိုးသိုးလေကနှုတ်ဆက်သလို လူနာဆောင်အမှတ်ခြောက်.... ပန်းသီးဆွတ်ချင်တဲ့အုတ်ကီးတွေ အမှတ်မထင်ဝင်ခဲ့မိတယ် အမှတ်မထင်ပြန်ထွက်သွားပေါ့ ဖျားနာနေတဲ့ဆရာဝန်နဲ့လမ်းမှာတွေ့တော့ သေခြင်းတရားကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုမလားစဉ်းစားမိတယ် မလိုဘူး........ မွေးဖွားလာဖို့ကလည်းပြင်ဆင်ချိန်မှမရခဲ့တာ သိမှတ်မှားခဲ့တယ် နေမင်းဟာပင်လယ်ထဲကိုမခုန်ဆင်းခဲ့ဖူး ကမ်းခြေဟာ နေ၀င်ချိန်တွေကို လိမ်ညာဖို့ကြိုးစားဆဲ............။ မိုးလှိုင်ည
ကဗျာရေးဖို့အတွက် ကျွန်တော်လူလုပ်နေတာပါဆိုတော့ တချို့ကမေးငေါ့ကြတယ်…အမေ မွဲချင်တဲ့ခွေးပြာပုံကိုပဲရွေးတယ်လို့ ပြာပုံထဲက အနွေးဓါတ်က သိုးမွေးထည်ယဉ်ကျေးမှုမြင့်မြတ်တာ ဘယ်သူတွေသိတတ်မလဲ…..။ ကိုယ်ဟာကိုယ်တောင် လူမွေးလူတောင်မပြောင်လို့ ကြွေးဟောင်းတွေမကြေခဲ့ဘူး…။ အမေ့ ကျေးဇူးဘန်းပြပြီး… တခြားမိသားစုတွေရဲ့မျက်ရည်တွေကို အဖိုးတန်တဲ့အရာတွေဖြစ်အောင် ကျွန်တော်အသွင်ပြောင်းမပေးတတ်ဘူး…အမေ ကျွန်တော်ရိုးသားခဲ့ပါတယ်… ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်… ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ခေတ်က အဲဒီလောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူးတဲ့…အမေ အမေ့သားက ကဗျာရေးရုံပါ ဘာမှမဟုတ်ခဲ့ဘူး ဘာမှမရှုပ်ခဲ့ဘူး အမှန်တရားအတွက်ဆို သားဖွားပြီးစ ကျားသစ်မလို ရန်လိုနေတတ်တာတစ်ခုပါ… ကျွန်တော်ဆီမှာဗျူဟာမရှိဘူးလို့ ကောက်ကျစ်သူတွေကဝေဖန်ကြတယ် ကျွန်တော်ကအရိုင်းဆန်ရုံသက်သက်ပါ မယုတ်မာခဲပါဘူး…အမေ ဒီဘ၀မှာမကြေခဲ့တဲ့အမေ့အကြွေးတွေအတွက် သံသရာမှာကျွန်တော့်အမေ ထပ်လုပ်ပါ… အခုတော့သားကဗျာရေးပါရစေ စာနာမှုတွေဆီ လောကလှည်းအိမ်ကို မြင်းအိုကြီးတစ်ကောင်လိုဆွဲယူနေပါရစေ..အမေ မိုးလှိုင်ည
ကြယ်ကြွေတွေအားလုံးရဲ့အသံတွေကို စုချည်ထားတဲ့ နံရံလေးဘက်နှလုံးသားတစ်ခု ကမ္ဘာမြေရဲ့အလင်းနှစ်များကိုထုဆစ်ခဲ့တယ် ငြိမ်းချမ်းခြင်းရဖို့… အသက်သွေးကိုမှကားစင်တင်မီးရှို့ခံခဲ့တယ် နံရံတွေအားလုံးက အမှန်တရားကိုတားဆီးမရနိုင်တဲ့အခါ ဘာသာစကားများ အဓိပါယ်များ ၀ိရောဓိများ…. ပြတ်သားရှင်းလင်းတဲ့ အမြင်ဓါတ်ရသ နှလုံးသားနဲ့ဦနှောက်ကိုထိုးဖောက်ခဲ့တယ် အလင်းနှစ်များစွာပေမယ့်…. သစ္စာတစ်ခုတည်းသာ….။ မိုးလှိုင်ည
အလွမ်းတဲ့....ငါ့ရင်ထဲကိုမုန်တိုင်းလိုချေမွတယ်...အဲဒီဟင်းလင်းပြင်ထဲမှာသတိရခြင်းတွေစုဖွဲ့လို့...ကြယ်လေးတစ်စင်းနဲ့ ...အဆက်အသွယ်မရတဲ့ညတိတ်ဆိတ်ခြောက်ချားခြင်းတွေကြီးစိုးငါ...အလွမ်းကဗျာတွေကိုရိုကျိုးခဲ့ရတယ်..အလွမ်းကို ကဗျာဆရာတွေဘယ်လောက်ဖွဲ့ဖွဲ့ငါ့နှလုံးသားကို မှီအောင် မဖွဲ့ဆိုနိုင်ဘူးငါရေးတဲ့...စကားလုံးတွေထက်ငါပိုလွမ်းခဲ့ရတယ်....နှလုံးသားကလွဲလို့...ခံစားချက်တွေကိုဘယ်သူမှသက်သေမပြနိုင်ခဲ့ဘူး...အလွမ်းပဲလေ...ငါ့ရင်ခွင်ကို မုန်တိုင်းလိုချေခဲ့တယ်....မိုး...
ဂစ်တာတီးမယ်ပန်းချီဆွဲမယ်ကဗျာရေးမယ်အောင်မြင်လာတဲ့တစ်နေ့ကျရင်ပြန်ပေးမယ်ငါတို့ကို ငွေရင်စိုက်ထားစမ်းပါဘဏ်တိုက်ကြီးတွေရယ်...။ဆေးပေါ့လိပ် ပါးစပ်မှာချိတ်စိတ်ကူးတွေတွင်းတူးကြရေနံတွင်းဆယ်တွင်းမှာတစ်တွင်းလောက်ပဲသေချာပါသတဲ့အရပ်ဆယ်မျက်နှာမှာလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်က ပိုကျိန်းသေကြဟိုတုန်းက...ပါရီလိုကဖေးတစ်ခုခုမှာ ဆုံချင်ကြလူသစ်ဓာတ်သစ်နဲ့ဘ၀တွေ ဘ၀ပြီး ဘ၀ပြောင်းကြ...။မွန်ခ်ျလားမြို့မငြိမ်းလားဆီလ်ဗီယာပလောသ့်အခုတင် အမည်ပြောင်းပြီး ထွက်သွားတယ်...။အနုပညာဆိုတာကျောသားရင်သားမခွဲခြားဘဲလူတောထဲ ပစ်ပယ်ခံဖို့ငါတို့ ပြန်လာကြတာပေါ့ ။...။၀င်းမြင့်
ပြက္ခဒိန်ပေါ်ကရက်စွဲတွေဟာ ဘ၀ကိုဘာလို့ချုပ်နှောင်ထားတာလည်း ရွေးချယ်ခွင့်သိပ်မရတဲ့နှစ်ကာလတွေကို ဆုံခဲ့ရတယ်.... ဘ၀ကိုစိတ်ကုန်လုဆဲမှာပဲ ရင်ထဲကိုမီးစာထည့်တယ်... ဆက်လက်လောင်ကျွမ်းဖို့ နှစ်သစ်ရဲ့နှုတ်ဆက်စကားတွေမှာက ပျော်ရွှင်ပါစေအထပ်ထပ်... ငါအမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်ပါရဲ့လား အိပ်မက်တွေကိုကျောက်မချကြေး.. နာကျင်မှုတွေနဲ့ရွေးယူထားရတဲ့...အချစ်စစ်ပါ... လေပြေတွေကမသိုးမသန့် နှလုံးသားကမုန်တိုင်းရနံ့တွေနဲ့ယဉ်ပါးဖူးတယ် ကျက်သွားတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုရယ်မောဖို့ ကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေကိုပြန်ပြောဖို့ သက္ကရ်ဇ်တွေဟာအသက်ရှင်လျှက်ရှိဆဲပါ....။ မိုးလှိုင်ည